Isitolo esidayisa yonke impahla Ecomomic laminate floor EIR Series Manufacturer and Supplier | Moyo
Usayizi: 1220X170mm,1220x200mm, 810X150mm
Ubukhulu: 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Izitezi ezinamanzi kwesinye isikhathi zibizwa ngokuthi izitezi ezinamapulangwe, yize ziyizinkuni kuphela ezicini ezimbili. Okokuqala, isisekelo sangaphansi se-laminate siqukethe izinhlayiya zezinkuni ezicindezelwe. Okwesibili, phezulu kubukeka ngokhuni lwangempela ngenxa yesendlalelo esinembile sesithombe — empeleni isithombe esinikezwe kahle sokhuni esifakwe kusendlalelo esicacile, esiqinile sokugqoka.
Izinhlayiya zezinkuni ezihlanganisiwe zibhekene nengcindezi ephezulu yokwenza amashidi. Lawa mashidi anesithombe se-photorealistic sokhuni noma samatshe esingezwe phezulu, futhi lesi sithombe simbozwe ngogqinsi lokugqoka. Isendlalelo sokugqoka, ishidi lepulasitiki elihlala isikhathi eside, elincanyana, nelicacile, yi-linchpin phakathi kwezendlalelo eziphansi ezibucayi nezinto zangaphandle ezinjengomswakama, imisebe ye-UV, nokunwaya.
Gqoka ungqimba:I-laminate flooring ungqimba lwamaphepha amabili amancane afakwe i-melamine. Lolu ungqimba oluphezulu kunawo wonke luhlobo lwepulasitiki oluqinile futhi olungabonakali ezinjeni, ezihlalweni, ezithendeni eziphakeme, nakwezinye izinto ezivamile ezilimazayo.
Isendlalelo Sesithombe: Ngisho noma kubhekwa ukuthi isitezi esiseduze se-laminate singabukeka singempela. Lokhu kungenxa yesithombe sekhwalithi enezithombe sokhuni laminate sokhuni lwangempela ngaphansi kongqimba lokugqoka.
Isendlalelo Sesisekelo (Isisekelo):Ngaphansi kwesithombe sezinkuni zokhuni cishe kunguhhafu-intshi wento ehlanganisa izinkuni. Noma yiluphi uhlobo lomkhiqizo wokhuni lwezinkuni luthinteka ekulimaleni kwamanzi. Isisekelo sangaphansi se-laminate sithathwa njengokuzinza ngobukhulu, kepha ngezinga elithile. Izoma namanye amanzi, kepha kuphela uma la manzi esuswa ngokushesha.
Ingabe i-laminate eco-friendly?
Impendulo yalo mbuzo incike encazelweni yakho yetiyela elinobungane, kepha yebo-konke, yebo! I-Laminate ingenye yezindawo ezinobungani bemvelo laphaya.
Lokho kungenxa yokuthi isebenzisa izinto eziphilayo (i-fiberboard noma i-plywood) kusendlalelo sayo esiyinhloko, futhi kuphela inani elincane kakhulu lezinto zokwenziwa kusendlalelo sayo sokugqoka. Lokhu kusho ukuthi ivuselelwa kabusha.
Uma kuqhathaniswa ne-vinyl, lokhu kwenza i-laminate inketho enobungani kakhulu. Enye yezinkinga ezinkulu zokufakwa kwepulangwe le-vinyl ukuthi lenziwe ngepulasitiki ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi, ngaphandle kwemikhiqizo emincane efana neProximity Mills, empeleni ayisebenzi kabusha.
Langaphambilini Indlu yangasese yePlastiki yokugezela i-guyana bamboo sheet pvc resin yephaneli yophahla
Olandelayo: laminate floor for parquet imibala